Abuuritaanka Isos iyo duubista teerminaalka Archlinux | Laga soo bilaabo Linux
Abuuritaanka iyo duubista isos-ka terminal-ka ku jira Archlinux
freebsddick | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan ku sii wadaynaa xarunta ... Mid ka mid ah waxyaabaha aan sida caadiga ah u sameeyo waa abuurista keydadka feylasha aan ku haysto guriga / guriga. Tani waxay muujineysaa qaadashada macluumaadka mashiinka si loo helo meel bannaan oo badan oo laga heli karo darawalka adag.
Waxaa jira qalab aad u wanaagsan sida K3B oo sumcad wanaagsan ku kasbaday bulshada isticmaaleyaasha GNU / Linux si ay ugu fududaato matalaadda adeegsadaha. Gaar ahaan, ma aanan isticmaalin K3B in ka badan 5 sano ama wax la mid ah aad iyo aad ayaan dhif u ahay waxaan u isticmaalay softiweer garaafyo ah abuurista feylashaas
Qalabka aan sida caadiga ah u isticmaalo waa isku mid kan K3B isticmaali lahaa iyada oo aan lagu darin isdhexgalka garaafka ee aaladdaas adeegsato iyo si toos ah xarunta.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan aragno waa haddii aan ku rakibnay aaladihii lagama maarmaanka u ahaa
Kiiskeyga wax soo saarkoodu wuxuu noqon doonaa in xirmada horay loo rakibay laakiin haddii aysan ahayn, sii wad inaad ku rakibto sudo pacman -S cdrkit. Tani waxay rakibi doontaa waxa lagama maarmaanka u ah fulinta howsha. Waxyaabaha soo socdaa waa in la dhigo buug hage ah oo aan ku leenahay faylal aan dooneyno inaan keydinno.
Tusaale ahaan waxaan ka abuuray gurigeyga tusmada magaca oo ku dhex jira buug kale oo aan dhigeyno feylasha aan dooneyno inaan duubeyno (DVD leh qiyaastii 4 Gb oo macluumaad ah).
Marka aan amar ku bixinno faylasha ku jira galka caga-dhigga, waxaan ku abuureynaa iso waxyaabaha soo socda:
Ka dib markaad riixdo gal, abuurka iso ayaa bilaabmi doona, kaas oo qaadan doona muddo in la qabto. Waa inaan sugnaa ilaa ay ka dhamaaneyso.
Taas ka dib waxaan ku xaqiijin karnaa cabirka iso-dayada cusub ee la abuuray amarka du -hlsc Archivos.iso, taas oo na siin doonta cabirka iso la abuuray
Waxa xiga waa in la duubo iso. waa inaan maskaxda ku haynaa in magaca aaladaha wax lagu duubo sida cd guud ahaan ay tilmaamayaan / dev / sr0 laakiin way ka duwanaan kartaa iyadoo kuxiran kiiska. Xaalada guud, amarka lagu badbaadiyo iso waxa aan haysano waa:
Marka hawshu dhammaato, waxa aan ka tagnay waa in la tuuro qalabka saar waxaana heli doonaa macluumaadka ku saabsan warbaahinta laga saari karo ...
Waxaan rajaynayaa inay waxtar leedahay waxaan rajaynayaa inaad faallo ka bixiso 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Abuuritaanka iyo duubista isos-ka terminal-ka ku jira Archlinux
Mhh, waxaan xasuustaa inaad taas i bartay, waqti hore xd
Ma waxaad ka timid caasimada federaalka (Argentina)?
Maya ahaha, spain, gobolka barcelona 😛
Anigu kama imid venezuela
Cad Waa ikhtiyaar wanaagsan
Cashar aad ufiican, aan dhaqan galino 😉
Ku jawaab Gacan ku dhiigle
Waan ku faraxsanahay inay waxtar kuu ahayd. Waxaa jira qalab badan oo la heli karo oo waxtar u leh nidaamka
Lagu Daray Dookhyada!
Thanks isbarbar dhig!
Waan sii wadi doonaa inaan dhigo waxyaabaha la xiriira isticmaalka makiinada laakiin waxaan u arkaa inay waxtar badan leeyihiin
Qoraalka noocan ah ma noqon karo kan ugu faalooyinka badan laakiin waa kuwo aad u qiimo badan, hambalyo, sii wad.
hubaal .. laakiin fikradda ayaa ah in qof uu u arko inay waxtar leedahay .. haddii ay sidaas tahay, ujeeddada qoraalkan waa la fulin lahaa!
Marwalba waan layaabi jiray, kuwa naga mid ah ee haysta Gnome, xface, kde, iwm iwm ... maxay noocee noocee ah noocee ah boostada isticmaalka Terminalka ah noo leedahay.
Maaha in laga xumaado qoraaga / qorayaasha, kaliya waa aniga kiiskeyga qaaska ah, wax walba oo xiriir la leh gubida CD-yada / DVD-yada waxaan si toos ah u isticmaalaa qaar ka mid ah barnaamijka GUI si aan u fududeeyo.
Waan ka xumahay hadaan xumaado ama dhaleeceeyo, waan ogahay in terminal-ka uu yahay kan ugu awooda badan uguna muhiimsan ee aan ku leenahay Linux, kaliya waa inay jiraan waqtiyo aan wax ka aqriyo terminal-ka oo aan ogahay in 2 ama 3 qasabno lagu xalin doono.
Kahor intaysan dhamaysan qoriga ay igu duubayaan, waxaan ula hadlayaa oo keliya isticmaalayaasha ugu dambeeya tan iyo markii aan ogahay in adeegeyaal badan ama ay sidaa ku ilaalinayaan iyaga oo aan u adeegsan qaab muuqaal ah
Waxa dhacaya ayaa ah markii aad horeyba u ogeyd amarrada, inaad sidan oo kale u sameyso way ka dhakhso badan tahay inaad siiso 2 ama 3 guji (taas oo runti had iyo jeer dhowr jeer ka badan), waxaad nadaafaddaada ka ilaalisaa oo isticmaalka kheyraadka ayaa ka yar.
1.- f12 inuu furo yakuake
2.- qor "wodim -v -dao -speed = 4 dev = / dev / sr0 File.iso" -> gal
1.- dhagsii liiska
2.- guji codsiyada
3.- dhagsii yutiilitida
4.- dhagsii X soft
5.- dhagsii faylka furan
6.- wuxuu ku dhajiyaa si aad ugu gudubto galka uu faylka ku yaalo una xulo -> Gali
7.- guji diiwaanka
Haddii aad haysato dalabkaaga kuwa ugu cadcad markaa waxaad keydin doontaa 3 guji laakiin wali hubaal way ka gaabineysaa oo dhammaan barnaamijyada ku jira kuwa ugu cadcad waa ikhtiyaar aan macquul ahayn.
Waad saxnaan kartaa ... Waxaan isku dayi doonaa inaan bilaabo isticmaalka qunsulka inbadan maadaama aanan si dhib yar ugu isticmaalin howlaha noocan ah hehehe ... waa hagaag waxay noqon doontaa isku dayga ...
Waxaan arkaa inaad isticmaasho KDE, sidaa darteed xulasho aad u fiican waa Krunner, waxay leedahay awood aan caadi aheyn.
Haa, dhab ahaantii halkan waxaan ka hadleynaa codsigan aadka u wanaagsan: https://blog.desdelinux.net/tag/krunner/
Aad baad ugu mahadsantahay caarada. Waxa intaa ka sii badan, waxaan jeclaan lahaa in aan u adeegsado qunsuliyadda kiiskan noocan oo kale ah oo aan u adkaysan karin inaan waqti badan ku lumiyo sidii la filayay.
Qoraal wanaagsan. Waxay sidoo kale leedahay sumcad xoris ah, inkasta oo aanan isku deyin.
Aad u wanaagsan, waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan qalabka lagu xakameeyo ayaa ah in la sameyn karo xitaa iyadoo indhahaagu xiran yihiin (laguma talinayo)
Aad u fiican, sidoo kale waxaan jeclahay inay jiraan qoraalo badan oo qaanso ah 🙂
waxaana jiri doona in ka badan intii suurtogal ah
Waxaan arkaa inay xusayaan xorriso, laakiin way ogyihiin awooda ay u leedahay inay ku cadaadiso faylasha (compression transparent).
Cadaadisku waa mid aad u fiican, oo markii la dhajiyo iso leh fuseiso ama Mount, waxaan furi karnaa feylka sida haddii ay ku dhex jirtay galka iyada oo aan la aqrin rukhsadaha
Iskuday, waa wax fiican.
Microsoft waxay abuuri kartaa smartwatch u gaar ah